Semalt बुझाउँदछ किन कसैले बट्स र वेबसाइट क्रॉलरहरू रोक्नु पर्छ
यो भन्नु सुरक्षित छ कि तपाईंको वेबसाइटमा आएको धेरै हेराईहरू गैर-मानव र गैर-वास्तविक स्रोतहरूबाट आएका हुन्, र यो ठीक छैन किनभने तपाईंले आफ्नो वेबसाइटलाई जीवनभर देख्न चाहानुहुन्छ भने यसबाट मुक्त हुनुपर्नेछ। यदि तपाईंलाई लाग्छ कि बोट ट्राफिक राम्रो र भरपर्दो छ, तपाईं ठूलो गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ किनकि यसले गुगललाई तपाईंको AdSense खाता असक्षम पार्न सक्छ। प्राय जसो, बोटहरू गुगल एनालिटिक्समा मानवीय ट्राफिकको रूपमा देखिन्छन्, तर महिनौं पहिले यो त्यस्तो थिएन। आजका दिनहरूमा साना वेबसाइटहरू द्वारा उत्पन्न y० प्रतिशत भन्दा बढी ट्राफिक बट्स र नक्कली स्रोतहरूबाट हुन्छ। म्याक्स बेल, Semalt विज्ञ, तपाईंलाई चेतावनी दिन्छ कि बोटहरू जहिले पनि तपाईंको साइटमा पुग्ने प्रयास गर्दछ धेरै तरीकाका साथ , र यो सम्भव नहुन सक्छ तपाईं उनीहरूबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ।
तपाईंको साइटहरूको भ्रमण गर्ने बोटहरूको महत्त्वपूर्ण संख्या नक्कली र बेकारको बाहेक अरू केही होइन; यिनीहरू तपाइँको वेब पृष्ठहरूको लागि उपयोगी छन् यदि तिनीहरू थोरै रकममा आउँदछन्। केहि राम्रो बोटहरू, उदाहरणका लागि, गुगल आफैंले नयाँ सामग्री अनलाइन पत्ता लगाउन प्रयोग गर्दछ। लगभग सबै खोज इञ्जिनले लेखहरूको गुणस्तर पहिचान गर्न राम्रो बट्स प्रयोग गर्दछ। उनीहरूले स्तर निर्धारण गर्ने तरिका परिवर्तन गरिएको छ, अब तिनीहरू विशाल झुण्ड सफ्टवेयर सेवाहरूको उपयोग गर्छन्। झुण्डले लि follow्कहरू पछ्याउँदछ, एक साइटबाट अर्कोमा जानुहोस्, र नयाँ र परिवर्तन गरिएको सामग्री अनुक्रमणिका। गुगल बोटहरू जटिल छन्, नियमहरूको गहिरो सेटसँग जुन उनीहरूको व्यवहारलाई व्यवहार गर्न सक्छ। उदाहरण को लागी, लिंक मा NoFollow आदेश तिनीहरूलाई कम प्रभावी र Google बट्समा अदृश्य बनाउँछ।
खराब बोटहरू ती हुन् जसले तपाईंको साइटलाई बिगार्छन् र कुनै फाइदा दिन सक्दैनन्। तिनीहरू जानाजानी खोजिन्छ र स्वचालित रूपमा अनुक्रमणिका हुन्छन्। तपाईंको सामग्री दुबै मानिस र बट्समा प्रदर्शित हुन्छ, गुण र प्रमाणिकतालाई वेवास्ता गर्दै। खराब बट्सले रोबोटको निर्देशनलाई वेवास्ता गर्दछ र आईपी ब्लकको प्रयोग नगर्नुहोस् तपाईंको वेब पृष्ठहरूको गुणस्तर कायम राख्न। यी बट्ससँग सब भन्दा ठूलो समस्या भनेको सामग्री अनुक्रमणिकामा गाह्रो छ र यो हैकर्सको लागि खुला रहिरहँदा तपाईंको प्रणालीसँग सम्झौता गर्नका लागि तपाईंको फाईलहरू पहुँच गर्न सक्ने अवस्थामा जनताबाट लुकाइएको छ। त्यहाँ स्प्याम बट्स पनि छन् जसले तपाईंको साइटको समग्र प्रदर्शनलाई बिगार्न सक्छ। तिनीहरूले तपाईंको साइटलाई पूर्वनिर्धारित सन्देशहरूले भर्दछ, सम्बद्ध बजारहरूलाई नराम्रो लाग्छ।
तपाईंले बट्स रोक्नु पर्छ?
यदि तपाईं लगातार राम्रो बट्सबाट हेराईहरू प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ भने, तिनीहरूलाई ब्लक हुन आवश्यक पर्दैन। तर यदि तपाइँ नराम्रा बट्सबाट हेराइहरू प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँले त्यसलाई रोक्नको लागि विचार गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले गुगलबट रोक्नु पर्छ, जुन तपाईंको साइटलाई खोज ईन्जिन नतीजाहरूबाट हटाउनको लागि हो। अर्कोतर्फ, तपाइँ निश्चित रूपमा स्प्यामबटहरू रोक्नु पर्छ। यदि तपाइँ DDOSing बाट तपाइँको साइटको सुरक्षा बारे सचेत हुनुहुन्छ भने, यो बट्स र स्प्यामरको IP ठेगानाहरूलाई रोक्न आवश्यक छ। सँधै याद गर्नुहोस् कि खराब बट्सले तपाईको रोबोट.टी.टी.टी. फाइलहरूको ख्याल राख्दैन, जुन धेरै दुर्भाग्यपूर्ण छ किनकि यो फाइलको सुरक्षा तपाइँको साइटको बृद्धि र समग्र प्रदर्शनको लागि अनिवार्य छ।